Dhimasho, Bahal, Dhimasho | Laga soo bilaabo Linux
Dhinta, bahal, dhinta
Ma ihi madax bir ah, mudane. Laakiin wararkan ku saabsan Flash ee hareeraha socda maalmahan, waxaa lagu soo koobi karaa heeskan Almafuerte.
Waagii beryay, isagoo warwareegaya ayuu soo muuqday,
deris ayaa i ogeysiiyay joogitaankiisa.
Is muujiya, khaati ka taagan khayaanada.
En mu de ci do y em pa cha do de es ca isir mo.
Waxaan helay baqdin iyaga dhashay!
Ilaahow aniga ha i badbaadiyo oo ka ilaali in taasi ii timaado, haa!
Naxdin baa reer baadiyihii i weydiistay
aan daryeelo maangaabnimadan aan hore loo maqal,
Gaadhigayga ayaan ku qaaday oo waxaan ka qaaday gobolka
Adoo Ilaahay u dhiibanaya, waxaan kuu sheegay:
Ha u celin cabsi,
ha soo laaban maya
¡dhintay daanyeer, dhintay!
Dib ugu noqoshada lacag bixinta, hadafkeygu waa dhameystirey
xaafadda ayaa igu qoslay mahadnaq.
Sababtoo ah waxay ahayd Sabti Barakeysan taas ayaa lagu xasuustaa
sida maalinta argagixisada ee meesha aan ku noolahay.
Bahal dhiman, dhinta!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Dhinta, bahal, dhinta
Miyay… wax baraysaa?
Waxaan jeclaan lahaa inaan dhaho ... Comical 😀
Flash-kaasi wuxuu cadeyn u yahay in warshada maanta ay leedahay shar badan oo bilawgii tobankii sano ee la soo dhaafay nalaga reebay hanti wadaagayaasha qadarinta u leh badbaadiyayaashan.
Stamina SoulAabbo adag !! 🙂
Ku jawaab Marcos_tux
Looma baahnayn jacayl aad u badan D:
Waxaan ka daawanayaa goobahaas pr0n taleefankayga gacanta si aanan u siin Flash Player kubbad.
Almafuerte haa haa !!
Stamina Almafuerte, madaxweynaha Iorio !!
Bir qalin ah \_ m /
Laba dhibaato uun baan arkay.
1.- Aaway naartii Shumway oo aanan arki karin?!
2.- Iceweasel weli wuxuu oggol yahay Flash Player NPAPI.
soo degso oo dhaqaajiso xusuusnow inaad ka hawlgasho bogag gaar ah oo aad taqaano hahaha
Waxaan kaliya ka baryayaa in Shumway sidoo kale loo heli karo Chrome iyo waxyaabaha la midka ah (Opera Blink, Maxthon, Vivaldi, iwm).
Uma arko wax dhibaato ah meel kasta illaa iyo inta fiidiyowyada ay daawanayaan shaqaalaha qaangaarka ah.
Ku jawaab Chaparral
Flash dhin, nacalad u dhinta hahaha! Stamina Almafuerte !!!
Waan maqli kari waayey heesta maxaa yeelay Firefox ayaa xannibay flashkayga. XD
Waxaan u isticmaalaa fidin la yiraahdo HTML5 video meel kasta. Kuu sheegi maayo inay wax walba la shaqayso, laakiin waxa jira qaar badan oo sida Vimeo, Youtube iyo dhawr kale oo si fiican u shaqeeya 🙂
In kasta oo aan ahay qof ka soo horjeedda Flash-ka sida dadka kale, mowduucani uma qalmo boggan. Waxay u maleyneysaa inay xoogaa ka sii culus tahay. Waxbarshada iyo ixtiraamku waa inay horta yimaadaan, ka dibna wax ku darsadaan.
Ku jawaab zetaka01
Halkii aad u nuglaan lahayd, waxaad uga caban lahayd qoraaga sababta uusan u gelin bogagga fiidiyowga ee Shiinaha (kuwani nasiib darro way ka fadhiisan yihiin Xfideos).
Ah, Jibriil, waxaad leedahay magaca malaa'ig laakiin maskaxda shaydaan. Isku dhafka saxda ah. Waxay soo baxday in porno horeyba ugu bedeshay html5. Maaha inaan arko, HEH.
Laakiin maaha bogagga fiidiyowga ee weyn ee Aasiya.
Waxaan u samayn lahaa maqaal la mid ah SourceForge (oo ka maqnaa in ka badan 24 saacadood) iyo mashaariicda sii wadashadeeda. ¬¬
Sourceforge ma hoos, waa in xariifku ka fikiray in lagu daro adware faylasha la soo dejisto. Ceeb
Sida laga soo xigtay bartiisa Twitter-ka haddii uu hoos u dhaco .. ama dayactir ku jiro https://twitter.com/sourceforge
Bogga ugu weyn wuu shaqeeyay laakiin markii aan galayay mashaariicda waxaan helay farriin khaldan 404.
Uma isticmaalo SourceForge, laakiin Manjaro ayaa adeegsada. Aniguna wax kale ma lihi waxaan sugaa inta dhibaatada la xallinayo.
Waxaan soo degsadaa Sourceforge, laakiin si taxaddar leh. Lacagtu waa waxa lagu xisaabtamo. Firefox waxay xannibtaa asal ahaan, inkasta oo hadda Firefox ay xannibto wax walba.
Ceeb, si fiican, runtii waan ku dheganahay Iceweasel.
Ah, faallo yar. Adiga kuguma dhicin inaad bedesho jawaabta biraawsarkaaga marka loo eego OS-ga aad isticmaaleyso, way fududahay.
Ku jawaab zetka01
Waan ku faraxsanahay FF ​​laakiin waa wax laga xumaado in mashruuc caan ah oo shirkad aan faa'iido doon ahayn ay tahay inuu ku ekaado rabitaanka kafaala qaadayaasha.
Ku jawaab Tile
Midkiin ma ogyahay sida aan ugu arki karo wax yar p0rn KaOS cusub oo rakibmay?
Aniga maahan ee waa saaxiib.
qoto dheer dijo
La'aanta Flash Player, kuma dhagaysan karo muusigga muusigga badan ee internetka adoo adeegsanaya raadiyaha internetka. Xal kasta?
Waxaan isticmaalaa radiotray si aan u dhagaysto muusikada, waxaa lagu cusboonaysiiyaa keydka rasmiga ah
Waxay tahay inay yihiin raadiyaha ku jira warbaahinta badan, adiguna ma dhagaysan kartid signalada khadka ku jira, sida xiriiriyehan, wax xal ah?
Waxaan nuqul ka siinayaa iskuxirayaasha idaacadaha Shoutcast ilaa Audacious (ama VLC), arrintuna waa mid go'an.
Qoraal asal ah. Isaguna wuxuu leeyahay shaqadiisa inuu ku sii dheereeyo.
Muddooyinkan dambe waxaan arkayaa waxa ay tahay multimedia on-line-ka maqal iyo muuqaal. Waa daciif on Linux. Ma ahan Linux. Laakiin wuu ka maqan yahay.
Idaacado badan ma shaqeeyaan. Iyo shirkadaha fiidiyowga lagu dalbado sida jomvi ama vodafoneTV, waxaan arki doonnaa Netflix oo imanaya Spain bisha Oktoobar…. Hagaag, waxay si toos ah u isticmaalaan microwine-ka Microsoft.
Internetku waa marba marka ka dambeysa maqal iyo muuqaalba Linux ayaa ka tagaya. Isaga maahan Ma siinayaan taageero, muddo.
Ku jawaab RafaLiin
Si runta loo sheego, Netflix waxay ku shaqaysaa mucjisooyin ku jira Chrome, iyadoo ay ku jiraan DRM's MSE iyo EME oo diyaar ah, marka lagu daro haysashada taageerada asalka ah ee H.264 codec oo ah muuqaal, taas oo u oggolaanaysa biraawsarka inuu ku raaxeysto Netflix dhibaato la'aan.
Maaddaama aanan wax yar u isticmaalin Chrome, waxaan badiyaa adeegsadaa biraawsarkaas si aan u daawado filimada iyo taxanaha anime ee aan inta badan ka helo Isbaanishka.
Waxaan rajaynayaa in buugga 'Netflix Spain' uu ka dhignaan doono sida Latin Amerika iyo reer Brazil dhawr sano gudahood.
LOL… Waxaad sifiican uqabteen iyo hees aan runtii jeclahay inaan dhageysto.
Jawaab Juan Carlos Ganazhapa Malla
Chrome dhexdeeda wan ku fiicanahay laakin Firefox-ka biraawsarka ayaa i garaacaya. Grrrrrrrrr
Jawaab si aad u dejiso
Dhammaan waxay kuxirantahay biraawsarka iyo amniga la dejiyay (ku dar). Waqtigaan la joogo sifiican ayey u tooganeysaa laakiin waan arki doonaa ... foornada lagu kariyo meesha ma taal.
Ku jawaab Culiadas
kayitli kayitsiz dijo
sidan oo kale aad baa loo garaacayaa
Kajawaab kayitli kayitsiz
maqaal aad u fiican bro…
Waqtigan xaadirka ah inta badan boggaga laguma weydiin doono inaad ku rakibto flash, waa wax la soo dhaafay
Ku jawaab fiidiyowyada
Kali Linux, waa qol weyn oo amniga IT-ga ah